Madaxweynaha PSG oo ka hadlay mustaqbalka xidigaha Mbappé iyo Neymar Jr – Gool FM
(PSG) 23 Feb 2019. Madaxweynaha kooxda Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ayaa u sheegay wargeyska “Le Parisien” ee dalka France, in labadiisa xidig ee Kylian Mbappé iyo Neymar Jr ay doonayaan in ka badan hal koox ee ka dhisan qaarada yurub.
Paris Saint-Germain ayaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kula soo saxiixatay Kylian Mbappé aduun dhan 180 milyan oo euros, halka uu isna Neymar Jr kagala soo wareegtay kooxda Barcelona qiimo dhan 222 milyan oo euros.
Nasser Al-Khelaifi ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay xiisaha kaga imaanaya Mbappé kooxda Real Madrid, halka uu jiro warar ku aadan in Neymar uu xiiseenayo dib ugu laabashada horyaalka Spain.
“Ma jiro xiriir rasmi ah ee lala soo sameeyay ciyaartoyda”.
“Waan hubaa in Mbappé iyo Neymar ay sii joogi doonaan 2000%, ma ahan 100%, kaliya warbaahinta Faransiiska ayaa sheegtay inaan ku qasbanaan doono iibinta midkood labadan xidig, laakiin taasi run ma ahan”.
“Sharciga dhaqaala wanaagsan naguma qasbayo inaan iska iibino ciyaartoydeena ugu fiican, waxaa dhici karta inaan iibino ciyaartoy kale, balse Mbappé iyo Neymar, kama mid ahan ciyaartoydaas”.
“Waan ku farxay guushii 6-0 ahayd ee Chelsea, balse…” - Guardiola